Bazana | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Inona no mahasoa ny fahasalamana ho an'ny fahasalamana?
Ny hazan-dranomasina na ny hazan-dranomasina dia efa fantatra nandritra ny arivo taona ho an'ireo mponina any Eoropa, Azia ary Amerika Avaratra, izay ankasitrahan'ny toetrany mahasoa. Ankoatra ny fanandramana mahafinaritra sy ireo karazan-tsakafo mahavelona amin'ny hazelany (sy ny raviny, ny baka ary ny fakany) dia manasitrana toetra. Tsy mahagaga raha nino ireo razambentsika fa manome vatana tsy mety maty io zavamaniry io ary omena azy amin'ny fahaiza-manaony mihoatra ny natiora.
Hazakazo (hazandrano) varieties: sary sy famaritana ny zavamaniry
Ny hazan-dranomasina dia antsoina hoe voanjo 20 karazan-tsakafo Hazel, izay an'ny Birch mianakavy, matetika mahasalama ny hazandrano, ny hazandrano lehibe ary ny hazan-dranomasina Pontian - endrika manaloka be. Ny fizarazarana dia Eurasia sy Amerika Avaratra, ao amin'ny faritry ny ala maitso marefo izay mamolavola azy. Ny fampiasana hazaniry ao amin'ny indostria ho an'ny famokarana siramamy sy zava-mamy dia tena mahazatra.
Nutmeg - ny fampiasana mahasoa sy mampidi-doza ny voankazo moka
Nutmeg dia antsoina hoe fofona malaza izay manana fofona mahafinaritra manokana, tsiranoka marevaka ary ampiasaina betsaka amin'ny sakafo. Na dia izany aza dia tsy lavitra ireo trano rehetra izay mamono voankazo malaza - izy dia nahita fampiharana tao amin'ny fanafody (nentim-paharazana sy ny vahoaka), cosmetology ary ny perfumery. Ao anatin'ity fitaovana ity, dia manolotra anao ny fijerena akaiky ny nutmeg sy ny toetra manokana ampiasainy.
Hatramin'ny antitra ka mandraka ankehitriny, ny holatra dia antsoina hoe "hazon'ny fiainana". Noho ny singa tokana manan-karena amin'ny vitamina, micro sy macro singa ary zavatra hafa mahasoa, ireo voanjo dia ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina maro, hamerenana ny fahaverezan'ny tanjaka, hanomezana hanoanana. Ny fanasitranana ny vatana miaraka amin'ny singa ilaina dia ampy ny voanjo vitsivitsy isan'andro.
Lasitra sedera: inona no manampy, inona no fihinana, fomba fampiasana sy fakana
Ny pine no malaza fa tsy ny fanandramana mahafinaritra fotsiny, fa koa ho an'ny sakafo be dia be, dia mety tsara ny mihevitra fa ny solika azo avy amin'ireo voanjo ireo dia hanana rakitra be koa. Aorian'izay dia hitantsika hoe amin'ny faritra inona avy ny menaka sedera, ary amin'ny ady atao amin'ny aretina izay afaka manampy.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Bazana